Ntugharị Web Scraping dị irè - Ntụziaka dị elu
Ọhụụ ahụ iji kpochapụ ihe ịma aka niile na ịnweta ozi sitere n'ike mmụọ nsọ nke ngwá ọrụ a. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, e wuru ngwá ọrụ ahụ iji mee ka ọ dị mfe maka ndị mmadụ ịnweta ozi a haziri ahazi.
Ya mere, a kpochapụrụ ihe mgbagwoju anya nke nchịkọta data na ụlọ nke a freeware nke weebụ (scraping freeware - estudiar fotografia en argentina a distancia. Ndị ọrụ ga - etinyekwu oge n'ịgụ ihe ma nyochaa ozi bara uru kama ịgbalị ịchọta ozi.
N'okwu dị mkpirikpi, nzube bụ isi nke ngwá ọrụ a bụ ime ka nchịkọta data dị mfe. Kama iji ihe eji eme ihe ngwaọrụ nchapu data nke siri ike maka onye na-abụghị onye ọrụ ịmara ma ọ̄ bụ ngwaọrụ ndị na-adịghị irè na ịdebe weebụsaịtị ndị dị mgbagwoju anya, ị nwere ike iji ihe dị mfe iji rụọ ọrụ ma ọ bụ ihe nrụpụta dị irè .
Mgbe ịchọtapụtara oge na ihe onwunwe ndị ọzọ na nchịkọta nke data, ị ga-aghọta na ọ dị mkpa dị mkpa iji rụọ ọrụ ngwa ngwa ma dị ike nke data.
ParseHub na-enye ndị mmepe njikwa zuru oke banyere otu ha nwere ike isi rụọ ọrụ ma gbanwee ihe ndị mere ka ọ ghara ịdị ha mkpa iji ihe nchọgharị weebụ webata. Site na ngwá ọrụ a, ha nwere ike ọ gaghị adị mkpa ịdebanye koodu nchịkọta data ọ bụla ọzọ. Nke a bụ n'ihi na ParseHub nwere ike ịrụ ọrụ na ụdị, ndetu, nyocha, njedebe na-enweghị ngwụcha, eserese mmekọrịta, na ọtụtụ ndị dị mfe.
Nke kachasị mkpa, ndị ọrụ adịghị mkpa ihe ọmụma ọ bụla nwere ike iji rụọ ọrụ. Dịka onye ọrụ, naanị ihe ị ga-eme bụ imeghe weebụsaịtị ma họrọ ozi niile ịchọrọ iwepụta. 3)
Ihe niile ị ga - eme bụ ịkọ ma pịa ihe niile ị chọrọ iji wepụ na ibe weebụ. ParseHub agaghị ewepụta ha maka gị, mana ọ ga - enyekwara gị aka ịmepụta ihe yiri ya na ibe weebụ ndị ọzọ eme ka usoro ahụ dịkwuo mfe ma dị nkenke karịa gị. I nwekwara ike ikpebi ịgbanwe site na mfe ịkwalite ọnọdụ iji nweta ụfọdụ atụmatụ dị elu.
Nke a na-eme ka ọ dị mfe ijide data na Gbanwee ya na ụdị ịhọrọ gị. API na-enyekwa gị ohere ibudata data ma ọ bụ JSON ma ọ bụ CSV formats
Ngwaọrụ ahụ nwere ike ịnata ụkpụrụ dị na nchịkọta data gị, ọ ga-ejikwa ya mee ka ntụziaka ntụziaka gị Ọ na-enyekwa gị nnwere onwe ime mgbanwe CSS nhọrọ na àgwà nke mmewere
ParseHub nwere ike ijikwa ebe nrụọrụ weebụ na ọtụtụ puku peeji nke jikọtara ọnụ. Ihe niile ị ga - eme bụ inye ntụziaka dị iche iche maka ibe ọ bụla, ma ị nwere ike jikọta ibe ibe niile site na ịpị bọtịnụ otu.
A na - agbagharị arịrịọ niile site na nnukwu ọdọ mmiri nke IP iji chebe nzuzo ndị ọrụ.
A na-echekwa data gị nke ọma maka ohere gị n'oge ọ bụla. Ị nwekwara ike ịhazi oge ịchọrọ ịnweta data gị. Ị nwere ike ime ya otu ugboro kwa ọnwa, kwa ụbọchị, oge ọ bụla, ma ọ bụ kwa nkeji ọ bụla. Ọ dị gị niile.